Yakaburitsa vhezheni itsva yeinotevera 1.3.0, iyo inogadziriswa webhu bhurawuza | Linux Vakapindwa muropa
Yakaburitsa vhezheni itsva yeinotevera 1.3.0, iyo inogadziriswa webhu browser
Inotevera inowanda, dhiabhodhi-inotarisisa webhu bhurawuza yakanyatsogadzirirwa vashandisi vemberi, webhu browser iyi yakasarudzika nekuti haina kufumura API yakavhurika zvachose uye inogadzirisika saka hapana chikonzero chekuitangazve iyo kuyedza shanduko dzako. Uye kusiyana nemapurojekiti akafanana (Konqueror kana Vimperator akafa, Qutebrowser…), haina kusungirirwa kune imwe injini yekushandura.
Next yakavakwa yakatenderedza zvinhu zviviri: iyo yepakati uye chiteshi chimwe pachikuva. Parizvino ine mapuratifomu maviri: GTK / WebKit uye Qt / Blink. Musimboti uri muCommon Lisp, chiteshi cheGTK muC uye Qt muPython (PyQt, Webengine).
Zvese zvinhu zvinotaurirana kuburikidza neD-Bus. Izvo zvakare zvinoshandisa XML-RPC pamberi peD-Bus uye shanduko inobatsira zvikuru bhurawuza.
Kunze kwezvakataurwa zveichi webhu bhurawuza (fuzzy kubhurawuza kuri kutonhorera chaizvo), Zvimwe zvinoshanda zvinogona kusimbiswa, senge:
kuvharidzira kushambadzira (padomeini)
yakavandudzwa yakasarudzika / fuzzy sarudzo
Mapfupi ekhibhodi muVim
maneja wekurodha pasi
a »kumashure-kumagumo» zvinoenderana neBlink, iyo Chrome inopa injini (yakawedzerwa kuWebKit kumashure-kumagumo)
Tsigiro yemaseva eproxy, saka Tor
1 Kushandisa sei
2 Maitiro ekuisa Anotevera Browser paLinux?
Sezvambotaurwa, ino webhu browser inoitirwa kuti ishandiswe nekhibhodi, saka ine akateedzana emakhibhodi mapfupi izvo zvinotsanangura mabasa akasiyana anogona kuitwa neichi browser.
Iwo ekukurumidza kuvhura makiyi anotevera:
Cl: Takura URL mune tebhu
ML: Takura URL mune itsva tebhu
Cx b: Chinja tebhu
Cb: Nhoroondo kumashure
Cf: Kutumira nhoroondo
Cx Cc: Siya
TAB: Mukwikwidzi akazara (mune minibuffer)
Zviratidzo zvinomiririra modifera:
C: Kudzora kiyi
S: Super (Windows kiyi, rairo kiyi)
M: Meta (Alt kiyi, Sarudzo kiyi)
s: Shift kiyi
Aya makiyi anotevera aripo semakiyi akakosha:
BACKSPACE, Bvisa, ESCAPE, HYPHEN, DZOKA, SPACE, TAB, Kuruboshwe, Kurudyi, Kumusoro, Kumusoro
Maitiro ekuisa Anotevera Browser paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi webhu bhurawuza, vanofanirwa kuziva kuti nzira yayo iri nyore kuGNU / Linux uye macOS, nekuti ivo vanogadzira vanopa zvese-mu-imwe faira reGuix uye iri muMacPorts.
Panyaya yaGuix, zvakakwana kuti zviitwe muhurongwa, tinoita izvi nekutevera mirairo yandinogovana pazasi.
Ipapo isu tinosvika semidzi uye tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Isu tinobuda muchikamu chemidzi uye tinogona kuisa browser nekutaipa:
Kunyangwe ivo vachipawo iyo sosi kodhi yebrowser kuti iite kusangana kune avo vanofarira nzira iyi. Iyo kodhi inogona kutorwa kubva pane iyi link iripazasi.
Finalmente kune avo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero kumwe kugovera kunoenderana neArch Linux, vanogona kuisa browser kubva kuAUR.
Ivo vanongofanirwa kunyora iwo unotevera kuraira mune terminal:
Mugadziri wayo anokurudzira kuti kusimudzira chengetedzo uchiona Internet, unogona kumhanya Inotevera neFirejail paLinux.
Firejail chirongwa cheSUID icho chinodzora njodzi yekutyora kutyora nekudzora nharaunda yekuuraya yezvinhu zvisina kuvimbika zvinoshandiswa zvinoshandisa Linux namespaces uye seccomp-bpf. Inobvumidza maitiro uye vese vayo vazukuru kuti vave nemaonero avo epachivande epasi rose akagovaniswa zviwanikwa zvekernel, senge network network, tafura yekuita, uye tafura yemakomo.
Kuti uite izvi, ingovhura terminal uye ita unotevera kuraira mairi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yakaburitsa vhezheni itsva yeinotevera 1.3.0, iyo inogadziriswa webhu browser
Iyo nyowani vhezheni yeNmap 7.80 inosvika uye idzi ndidzo dzakanyanya kukosha shanduko